လက်ကား Vortex စီးဆင်းမှုမီတာထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ ANGJI
Intelligent vortex converter သည်ငါတို့ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ထားသော vortex flowmeter ပေါင်းစပ်ထားသော circuit အသစ်ဖြစ်သည်။ အပူ၊ ဖိအားနှင့်အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်အတူရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ စွမ်းအင်၊ သတ္တုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စံပြကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
1.LCD dot matrix display၊ အမြန်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့်စုစုပေါင်းစီးဆင်းမှု၊ အပူချိန်နှင့်ဖိအားတန်ဖိုးတို့ကိုတောက်ပသောနောက်ခံအလင်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြသနိုင်သည်။
၂။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်နည်းစနစ်သည် Detector signal ၏စွမ်းအားကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး pipeline တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအနှောင့်အယှက်များကိုတားဆီးနိုင်သည်။
3.K-Factor linear: XJWJ သည် ၁ မှ ၁၀ မှတ်အထိ k-Factor ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။
4. တုန်ခါမှုနှင့်ဖိအားအတက်အကျကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအချက်ပြများကိုထိရောက်စွာဖိနှိပ်ပေးသည်။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သို့မဟုတ်ကိရိယာသော့ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုသာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောတူရိယာ caliber ၏ဓာတ်ငွေ့၊ အရည်သို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
6. 16-bit microcomputer ချစ်ပ်သည်မြင့်မားသောပေါင်းစည်းမှု၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်တစ်ခုလုံး၏အားကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများ၏အားသာချက်များရှိသည်။ စက်မှုရွေ့လျားနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ၊ တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ သက်တမ်းရှည်။ အထူးထိန်းသိမ်းမှုမပါဘဲရေရှည်လည်ပတ်မှု။
ဖိအားနှင့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ (Pt100or Pt1000) သည်တစ်လုံးထဲတွင်ပါ ၀ င်သောပေါင်းစပ်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိုပိုမိုကျစ်လစ်စေသည်။ တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှု၊ ဖိအားနှင့်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်ချုံ့အချက်ဆုံးမခြင်းခြေရာခံ။
၈။ EEPROM နည်းပညာဖြင့် parameter setting ကိုအဆင်ပြေပြီးအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ အရှည်ဆုံးသမိုင်းအချက်အလက်များကိုတစ်နှစ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
၉။ သူ၌ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ ကြွယ်ဝသောမိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးသည့်အချက်အလက်များ၊ သုံးစွဲသူအတွက်စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်နှင့် debug လုပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။
၁၀။ သီးခြားလွတ်လပ်သောစကားဝှက်ချိန်ညှိချက်များဖြင့်၊ ခိုးယူမှုစနစ်သည်စိတ်ချရသော၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ စုစုပေါင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့်စံကိုက်ညှိခြင်းများကိုအဆင့်ဆင့်အမျိုးမျိုး၊ သုံးစွဲသူများအဆင်ပြေစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
၁၁။ converter သည် frequency pulse,4~ 20mA analog signal ကိုထုတ်ပေးနိူင်ပြီး RS485 interface ကိုလည်း microcomputer နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိူင်တယ်။
12.The converter 360 ဒီဂရီလှည့်ပြသထားတယ်, ဒါကြောင့်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်
အသုံးပြုသူများမှရွေးချယ်နိုင်သော 14. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှိုးစက် output ကို switch signal ကို output ကို။
အေပါ ၀ င်မှု - ၂၄VDC + ၁၅%၊ ၄ မှ ၂၀ မီတာထုတ်လွှတ်မှု၊ Pulse output၊ alarm output၊ RS-485 စသည်။
ခအတွင်းပိုင်းပါဝါထောက်ပံ့မှု - ၃.၆V လီသီယမ်ဘက်ထရီ (ER26500) ၏အုပ်စုများသည်ဗို့အား ၃.၀V ထက်နည်းသောအချိန်တွင် ၂ နှစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ခဘက်ထရီစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု - ပျမ်းမျှအားဖြင့် 1mW သုံးစွဲမှုအားနှစ်နှစ်ကျော်အသုံးပြုနိုင်သည်
သွေးခုန်နှုန်း output ကို mode ကို
အေအာရုံခံမှုသွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြမှု၊ သွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြစီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာ၊ သီးခြားအသံချဲ့စက်ထွက်ရှိမှု၊ မြင့်မားသော 20V ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏနှင့် 1V ထက်နည်းသောနိမ့်မှု၊ ကြိမ်နှုန်း, 0-5000HZ output ကို, သက်ဆိုင်ရာချက်ချင်းစီးဆင်းမှု, ဒီ parameter သည်ခလုတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
ခနှင့်ညီမျှသောသွေးခုန်နှုန်းအချက်ပြမှု၊ သီးခြားအသံချဲ့စက်ထွက်ရှိမှု၊ မြင့်မားသော 20V ကျော်နှင့်နိမ့်သောအဆင့်သည် 1V ထက်နည်းသည်သို့မဟုတ်ညီမျှသည်။ ယူနစ်ပမာဏကို pulse range ကိုယ်စားသတ်မှတ်နိုင်သည် - 0.0001m3 ~ 100m3 ။
Note: output ညီမျှသော pulse signal frequency ကို 1000Hz ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ညီမျှသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ IC card ကြိုတင်ပေးချေမှုစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆို့ရှင် Controller နှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ မြင့်မားသော output output signal amplitude သည် 2.8V ထက်ကြီးသည်၊ နိမ့်သော amplitude သည် 0.2V ထက်လျော့နည်းသည်။
RS-485 ဆက်သွယ်ရေး (photoelectric isolation)
RS-485 interface ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အဝေးထိန်း display နှစ်ခု၊ အလယ်အလတ်အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့်စံအသံအတိုးအကျယ်စီးဆင်းမှုနှင့်စုစုပေါင်းအသံအနိမ့်အမြင့်ပြီးနောက်အပူချိန်နှင့်ဖိအားလျော်ကြေးတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
4 ~ 20mA စံလက်ရှိအချက်ပြ (photoelectric isolation) နှင့် standard volume သည်သက်ဆိုင်ရာ 4mA,0m3 / h၊ အမြင့်ဆုံး standard volume နှင့်သက်ဆိုင်သော 20 mA (တန်ဖိုးကို level menu တွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်)၊ သို့မဟုတ်သုံးဝါယာကြိုး, အ flowmeter အလိုအလြောကျလက်ရှိမှန်ကန်သောနှင့် output ကိုအညီဖြည့်စွက် module ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
ထိန်းချုပ်မှုနှိုးစက် signal ကို output ကို
A. အချက်ပြအချက်ပြ (LP) - photoelectric isolation၊ မြင့်မားသော alarm, alarm level ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 12V ~ + 24V အလုပ်လုပ်သော voltage၊ အများဆုံး load current 50mA
ခသတိပေးအချက်ပြ (UP) - photoelectric isolation၊ အဆင့်မြင့် alarm, alarm level ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 12V ~ + 24V အလုပ်လုပ်သော voltage၊ အများဆုံး load current 50mA
အဆို့ရှင်နှိုးစက် output ကို (BC အဆုံးနှင့်အတူ IC ကဒ် controller ကို) ကိုချွတ် C. : ယုတ္တိတံခါးကို output ကိုဆားကစ်, ပုံမှန် output ကိုအနိမ့်, လွှဲခွင် 0.2V ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ညီမျှ; အချက်ပြ output level၊ amplitude သည် 2.8V ထက်ကြီးသည်။ load ခုခံနိုင်မှုသည် 100k ထက်ကြီးသည်
battery ဘက်ထရီနိမ့်ဗို့အားနှိုးစက် output ကို (BL အဆုံးနှင့်အတူ IC ကဒ် controller ကို): ယုတ္တိတံခါးကို output ကိုဆားကစ်, ပုံမှန် output ကိုအနိမ့်, လွှဲခွင် 0.2V ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ညီမျှ; အချက်ပြ output level၊ amplitude သည် 2.8V ထက်ကြီးသည်။ load ခုခံနိုင်မှုသည် 100k ထက်ကြီးသည်
3-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ အနိမ့်နှင့်အနိမ့်ဆုံးအချက်ပြအချက်ပြ output၊ IC ကဒ် controller interface
2- ဝါယာကြိုး4~ 20mA output ကို; 2-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံး IC card controller interface
2- ဝါယာကြိုး4~ 20mA output ကို; RS485,2-wire Pulse output နှင့်အတူ 2-wire ကို, ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံး, IC ကဒ် controller ကို interface ကို
3-wire4~ 20mA output, 3-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအား၊ IC card controller interface၊ အထက်နှင့်အောက်နိမ့် alarm alarm
4-wire4~ 20mA output, 3-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအား၊ အနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအချက်ပေးအချက်ပြ output, IC card controller
RS-485,3-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ အနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအချက်ပြအချက်ပေးမှုနှင့်အတူ ၃- ဝါယာကြိုး၊ IC card Controller interface
RS485,3-wire နှင့် 3-wire4~ 20mA output၊ 3-wire Pulse output၊ ဘက်ထရီစွမ်းအား၊ အနိမ့်နှင့်အနိမ့်ဆုံးအချက်ပြအချက်ပြ output၊ IC card controller interface
RS485 ပါ ၀ င်သော 4-wire, ၄- ဝါယာကြိုး ၄ မှ ၂၀ မီတာအထွက်၊ ၃- ကြိုးလွန်းတင်ပို့မှု၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ အထက်နှင့်အောက်အနိမ့်အမြင့်အချက်ပြအချက်ပြမှု၊ IC ကဒ်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်
ရေဝဲ Flowmeter စျေး